एनआरएनए नेतृत्वमा कांग्रेस भर्सेस नेकपा : कसको पोल्टामा जाला ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 09:36:53
जापानी समय : 12:51:53
16 October, 2019 12:34 | एन आर एन न्युज , जापान | comments | 44400 Views
विश्वका ८१ मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पक्षधरहरुको कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यलाई कांग्रेसनिकट र कुमार पन्तलाई नेकपा निकट ठानिएकाले अहिलेको निर्वाचनलाई कांग्रेस भर्सेस कम्युनिष्टका रुपमा हेरिएको छ ।
अध्यक्षका दावेदार कुमार पन्त र कुल आचार्य आआफ्नो समूह नै लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । मंगलबार देखि सुरु भएको एनआरएनएको नवौं विश्व सम्मेलन तथा नवौं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार काठमाडौंको हायात होटलमा निर्वाचन गर्दैछ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४२ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुने छ । विभिन्न देशबाट आएका २५६ भन्दा बढी सय प्रतिनिधिहरुले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानमा भाग लिँदैछन् ।
नेतृत्व हत्याउन आफ्नो समूहसहित चुनावै मैदानमा होमिएका संघका वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका बेलायत निवासी व्यवसायी कुल आचार्यले अन्तिम समयमा आएर पन्तलाई टक्कर दिएका हुन् । प्रजातान्त्रिक विचारधारका आचार्यको समूहलाई कांग्रेस निकटका रुपमा हेरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति सम्वद्व एनआरएन प्रतिनिधिहरु आचार्यलाई जिताउन एकतावद्व बनेका छन् ।
आचार्यको समूहबाट पाँच उपाध्यक्षमा डा केशव पौडेल (अमेरिका), मन केसी (अष्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (मध्यपूर्व) र रबिना थापा (अमेरिका)लाई अगाडि सारिएको छ । यस्तै महासचिवमा बेल्जियम निवासी व्यवसायी जानकी गुरुङलाई अघि सारेका छन् । गुरुङ एनआरएनएकी वर्तमान सचिव हुन् । यस्तै वर्तमान सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले आचार्य समूहबाट कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । यता दुवै पक्षसंग राम्राे सम्वन्ध भएका सुदन थापाले पनि काेषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन। थापा वर्तमान युवा संयाेजक हुन।
राजनीति बढेको भन्दै महतोद्वारा एनआरएनए सम्मेलन वहिस्कार
यसअघि दुईपटकसम्म उपाध्यक्षमा बनेका जर्मनी निवासी व्यवसायी कुमार पन्तको समूहलाई नेकपा निकटका रुपमा चिनिँदै आएको छ । तर, केही उम्मेदवारहरु प्रजातान्त्रिक विचारधारका र केही स्वतन्त्ररुपमा चिनिएका छन् । पन्त समूहबाट ५ उपाध्यक्षमा डा. बद्री केसी (रसिया), हिक्मत थापा (अफ्रिका), सोनाम लामा (अमेरिका), अर्जुनकुमार श्रेष्ठ (बेल्जियम) र धर्मराज अधिकारी (अष्ट्रेलिया) छन् ।
खुल्लातर्फ उपाध्यक्षमा ४ पद रहेकाले श्रेष्ठ र अधिकारीमा कसलाई अघि लैजानेबारे पन्त समूहमा अझै पनि छलफल चलिरहेको कुमार पन्त निकटस्रोतको भनाइ छ । महिला उपाध्यक्षमा पन्त समूहबाट रसिया निवासी सपिलाराज भण्डारीले उम्मेदवारी दिने भएकी छिन् । पन्त समूहले महासचिवमा बेलायत निवासी प्राध्यापक डा हेमराज शर्मालाई अघि सारेको छ भने सचिवमा अझै निर्णय भैसकेको छैन ।
पन्त समूहबाट कोषाध्यक्षमा जापानका महेशकुमार श्रेष्ठले उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । पन्त समूहबाट सह–कोषाध्यक्षमा लोकप्रसाद दाहाल (बेल्जियम), गोबिन्दप्रसाद गौतम (रसिया) र एसी शेर्पा (अमेरिका)ले दाबी गरेका छन् । तर, अन्तिम समयमा आएर दाहाल वा गौतम मध्ये एकलाई अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको पन्त निकटस्थहरुको भनाइ छ । यसअघि शेर्पालाई जिताउन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेसँग पन्तले सहमति जनाएकोबारे चर्चा चलेको थियो ।
कोषाध्यक्षमा सापकाेटाले महेश श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने चर्चासंगै जापानकै सुदन थापासंग महेशकाे भिडन्त हुने निश्चित भएकाे छ।